ZITA ROKUSINA MUGERMAN (GENITIVE) | Kudzidza ChiGerman, Kudzidza ChiGerman
musha » Top German Courses » Zita rechiGerman re Hali (German Genitiv) Kucherechedza
ZITA REGERMAN NAME (GENITIVE)
Kana usina kudzidza zita rechiGerman musati watanga nhoroondo yeGenitiv, tinokurudzira kuti uongorore zita rechiGerman ini uye zita rechiGerman e. Akkusativ hurukuro muchiGerman Mushure mokuongorora hurukuro yechiGerman Akkusativ German Dativ lecture Iwe unogona kuverenga chidzidzo.
Mushure mekudzidza chiGermany i uye e Genitiv hurukuro muchiGerman ndiko kuti, iwe unogona kuverenga musoro wakatsanangurwa papeji ino.
Kazhinji, hapana chinhu chakadai shanduro yeTurkey yenyika.muGermany, iyo inonzi mazita ezita, zita reTurkey, kazhinji rinowanikwa nenzira yemutsara.Semuenzaniso, "musuo wechikoro", "penderedza yemadziro", "Ali sweat. Sezvimwe mune dzimwe nguva, nzvimbo yezita iri inowanikwa nekushandura nyaya.
Kuchinja uku kunoitika sezvinotevera;
der artikeli des inosvika uye kuguma kweshoko-kana--ndi chimwe chezvishongo.
Das artikeli des is the end of the word and one of the -es or -s jewelry.
kufa artikeli inoti uye hakuna kuchinja mushoko (iyo inoshandiswa mumazita akawanda).
ein artikeli eines uye -es kana -s pakuguma kweshoko ndeimwe yezvishongo.
eine artikeli inova einer uye hakuna shanduko muzwi.
Icho chirevo chinonyanya kuve chikafu uye shoko-zvimwe--zvibatanidzwa kune kuguma kweshoko.
keine artikeli inova mufambiro uye hapana shanduko muzwi.
Kuchinja kunoitika paunoita fomu yepamusoro inoratidzwa.
Kana iwe ukateerera, takashandisa mutsetse se "imwe ye-ye-kana-charms getiril.
Saka, ndeupi watinounza? Tinoona izvi nenzira inotevera;
Kana zita racho riri monosyllabic, "-i ir inowedzerwa kusvika kumugumo.
Kana zita iri rinopfuura syllable imwe chete, "-s. Inowanikwa kusvika pakupedzisira.
Ona mienzaniso iri pasi apa.
der Vater (baba) des- des Vaters (baba)
das Haus (imba) des- des Hauses (imba)
der Mann (murume wacho) ----- des Mannes (murume)
Sezvo zvinogona kuonekwa kubva kumusoro, der uye das artikels dzinoshandiswa uye zveshoko -es, -s rinowanikwa kune rimwe rezvishongo.
kufa Frau (kadzi) ------ der Frau (kadzi)
kufa Mutter (amai) ------ anoti Mutter (amai)
Sezvakaratidzwa pamusoro, kufa kwechikafu kunoshanduka mukati uye hakuna kuchinja mushoko. Izvi zvinoshanda kune zvizhinji:
kufa Mut Muteri (vanaamai) ------ vanoti Mutter (wevana)
die Autos otomobil der Autos (yemotokari)
Zvino regai titaure mienzaniso yezvinyorwa zvisinganzwisisiki;
ein Bus (bhasi) ------ eines Busses (bhasi)
eine Frau (mukadzi) einer Frau (mukadzi)
keine Frau (kwete mukadzi) --- keiner Frau (kwete mukadzi)
kein Bus (kwete bhazi) e keines Busses (kwete bhazi)
Mune mienzaniso iri pamusoro apa, zvinokwanisika kuwana dudziro ye "hapana bhazi" panzvimbo ye değil kwete bhazi "uye" kwete bhazi "panzvimbo ye değil kwete bhazi".
Muzvitsauko zvakapfuura, pane mitemo inoshamisa ye-de-i uye -e.
(Zvizhinji zvemashoko zvinoguma ne -n, kana zvishongo.) Takataura kuti izvozvi zvinoshanda kune zvese zvezita racho saka hatifungizve pano.
Kupa mienzaniso mishomanana;
der Mudzidzi - wevadzidzi
Kuti urishandise zvakanaka, unofanirwa kuongorora mienzaniso iyi, kwete kunyange iwe pachako, uye edza kuita mienzaniso iwe pachako.
Tinokudai iwe kubudirira ...
TAGS: 10 chiGiriki zita rechiGerman, 11 chiGiriki zita rechiGerman, 12 chiGiriki zita rechiGerman, 9 chiGiriki zita rechiGerman, German genitiv 11 kirasi, German genitiv 12 kirasi, german genitive lecture, German, German, shanduro yemutauro wechiGerman, Nyaya yezita rechiGerman